Dalkee loogu hor bilaabayaa tallaalka Corona haddii la helo, qiimuhu se waa imisa? | Gaaroodi News
Dalkee loogu hor bilaabayaa tallaalka Corona haddii la helo, qiimuhu se waa imisa?
September 11, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Haddii ay seynisyahanada ku guuleystaan helidda tallaalka feyriska Corona, ma jiri dono tallaal ku wada filnaanaya caalamka oo dhan o si dhaqso ah loo gaarsiin karo.
Cilmi-baarayaasha iyo shirkadaha soo saara dawooyiinka ayaa qiimaynaya waqtiga ay qaadan karto in la soo saaro tallaalka iyo tijaabadiisa.
Tallaabooyiin qeyru caadi ah aya la qaaday si loo xaqiijiyo in tallaaka la soo saaro lana gaarsiiyo daafaha kala duwan ee caalamka.
Balse waxaa jira walaac laga qabo in tartanka ay ku guuleysan doonaan dalalka hodanka ah, lana hilmaami doono dalalka saboolka ah.
Hadaba yaa u hor helaya, imisa ayuu se qiimuhu noqonayaa, sidee loo xaqiijin karaa in qofna uusan seegin?
Tallaalka feyrisyada ayaa inta badan in la soo saro waxay qaadataa sanado badan, sida in la tijaabiyo islamarkana goobaha kala duwan la gaarsiiyo, balse in lagu guuleysanayo ma aha mid la damaanad qaadi karo.
Ilaa iyo imika guud ahaan calamka hal cudur oo ka mid ah kuwa faafa ayaa caalamka laga cirib tiray kaasi oo ah – smallpox – waxayna arrintaas qaadatay 200 oo sano.
Cudurada kale ee faafa sida Dabeysha, Jadeecada iyo Qaaxada ayaa ah kuwa wali jira.
Baadi-goobka iyo tijaabada ayaa waxaa ku lug leh kumannaan qof , waxana socda dadaalada lagu doonayo sidii loo heli lahaa tallaal feyriska looga hortago.
Dhanka kale soo saaridda ayaa la dardar-galiyay iyada oo maalgashadayaasha iyo shirkadaha dawooyiinka soo saara ay diyaarinayaan malaayiin doolar si loo soo saaro tallaal waxtar leh.
Waxaa socda dadaalada lagu baadi goobayo tallaalka Covid-19
Goormaa la filayaa in la soo saaro tallalka feyriska Corona?
Baaritaanada iyo dadaalada Ruushka ee tallaalka loo yaqaano Sputnik-V ayaa muujiyay calaamado ah in uu difaaca jirka ka jawaabay islamarkana waxaa tallaalka guud la bilaabi doonaa bisha October.
Dalka Shiinaha ayaa waxay dhankooda ku guuleysteen soo saaridda tallaal kaasi oo lagu billaabi doono militariga dalkaasi.
Balse waxaa wlaac laga muujiyay sida dhaqsada ah ee labadan tallaal lagu soo saaray.
Tallalada Shiinaha iyo Ruushka labaduba ma aysan marin wajiga saddexaad ee ay u jaangoysay hay’adda caafimadka aduunka ee WHO inay tallaalada maraan.
Qaar ka mid ah tallaladani ayaa lagu wadaa in la ansixiyo dabayaaqada sanadkan.
Shirkadda AstraZeneca ee soo saarta dawooyiinka ee fadhigeedu yahay UK islamarkana kaashanaysa jaamacadda Oxford ayaa waxaa ay dhankeeda waddaa dadaalo lagu doonayo in tallaal lagu so saaro.
Ka hortagidda in tallaalka lagu saleeyo waddaniyadda
Dowladaha ayaa ku dadaalaya sidii ay u heli lahaayeen tallaal suurtagal ah islamarkana waxay heshiisyo malaayiin dollar ay ku baxayso la galeen shirkadaha wada dadaalada lagu raadinayo tallaalka iyada oo aan xitaa si rasmi ah loo ansixin.
Tusaale ahaan dowladda Britain waxay heshiis lacagta ku baxday aan la sheegin la gashay 6 shirkadood oo ay suragal tahay in ay ku guuleystaan helidda tallaalka feyriska Corona.
Mareykanka ayaa dhankooda rajeynaya in ay helaan 300 oo milyan oo dose bisha January.
Xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee Mareykanka ayaa waxay ugu baaqday gobolada Mareykanka inay u diyaar garoobaan in xarigga laga jaro ololaha tallaalka 1 bisha November.
Balse dalalka oo dhan uma suuragalayso in sidaasi oo kale ay sameeyaan.
Hay’adda dhakhaatiirta aan xudduuda lahayn ee MSF oo iyadu hormuud ka ah howlaha gaarsiinta tallaalka goobaha qaar ayaa sheegaysa in shirkadaha daawooyiinka oo heshiisyo hordhac ah lala sii galo ay abuurayso “halis ah in tallaalka waddaniyad lagu saleeyo ama ay helaan oo kali ah dalalka hodanka ah ee hormaray “.
Waxay arrintani yareynaysaa in dalalka saboolka ah uu tallaalkani gaaro.
Horey ayaa dalalka qaar waxay la daalaa dhacayeen qiimaha tallaalada lagu badbaadinayo caruurta.
Dr Mariângela Simão, oo ah ku xigeenka agaasimaha WHO u qaabilsan helidda daawooyiinka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo ka hortagidda in tallaalku uu noqon mid dalal gaar ah oo kali ah ay helaan ama qaab waddaniyad lagu saleeyo.
Dhakhtar ku jirta howlaheeda
Imisa ayuu noqonayaa qiimaha tallaalka?
Iyada oo balaayiin doolar lagu qarash gareeyay soo saaridda tallaalka, ayaa waxaa hadana la ballanqaaday in malaayiin dollar oo kale lagu soo iibiyo islamarkana meelaha kala duwan lagu gaarsiiyo.
Qiimaha waxay ku xiran tahay nooca tallaalka iyo caddada uu qofka dalbado.
Shirkadda soo saarta dawooyiinka ee Moderna,ayaa tusaale ahaan sheegtay in tallaalka ay suurtagalka tahay inay soo saarto uu halkii Dose qiimihiisu noqon doono inta u dhaxeysa $32 and $37.
Shirkadda AstraZeneca, ayaa dhankeeda sheegtay in tallaalkeeda ay ku iibin doonto dhowr doolar.
Machadka Serum ee dalka Hindiya (SSI), oo ah shirkada tallaalka ugu badan soo saarta caalamka oo taageero ka helaysa shirkadda Gavi and the Bill & Melinda Gates Foundation ayaa dhankooda sheegay in qiimaha halkii Dose uu noqon doono $3.
Balse bukaanada la siinayo tallaalka ayaa laga yaabaa in aan qarashka iyaga laga qaadin.
Dalalka sida UK iyo Australia ayaa waxay xukuumadahoodu sheegeen in si bilaasha ah muwaadinintooda ay u heli doonaan tallaalkaasi.
Waxaan sidoo kale lacag laga qaadi doonin dadka tallaalka ka hela hay’adaha gargaarka.
Yaa ugu hor helaya tallaalka ?
Inkastoo shirkadaha soo saara dawooyiinka ay sameyn doonan Tallaalka, hadana iyaga ma aha cidda go’aanka ka gaaraysa dalka ama cidda ugu hor helaysa.
“Urur kasta ama dal kasta waa in uu go’aansadaa cidda ugu hor helaysa tallaalka iyo sida arrintasi loo sameynayo,” waxaa sidaasi BBC u sheegay ku xigeenka madaxa shirkadda AstraZeneca Sir Mene Pangalos.
Maadama marka hore la xaddidayo gaarsiinta tallaalka dalalka kala duwan ayaa waxa laga yaabaa in mudnaanta kowaad la siiyo dhakhaatiirta ku howlan caafimaadka.
Iyada oo la soo saarayo tallaal badan ayaa waxaa lagu wadaa in qoodeynta ay gaarto 20% tirada dadka – waxaana mudnaanta la siinayaa dadka da’dooda ka wayn tahay 60 sano amaba kuwa kale ee nugul.
Markaasi ka dib ayaa tallaalka loo qeybinayaa iyada oo la eegayo hanaanka sida dalalka nugul iyo kuwa halista ba’an ugu jira Covid-19.
Dalalka ayaa waxay haystaan ilaa 18 bisha September inay soo bandhigaan dalabkooda ayna bixiyaan lacaga hordhaca ah 9 October.
Waxaa sdoo kale wale socda wadaxajoodyada ku aadan qaababka kale ee asaasiga u ah geedi socodka qoondeynta tallaalka